Saraakiil Boolis oo ka socotay dalka Sierra Leone oo gaaray magaalada Muqdisho | SAHAN ONLINE
Saraakiil Boolis oo ka socotay dalka Sierra Leone oo gaaray magaalada Muqdisho
MUQDISHO – Waxaa maanta gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya saraakiil Boolis oo ka socotay dalka Sierra Leone,kuwaasoo ka degay garoonka Aaden Cadde una sii-gudbay magaalada Kismaayo.
Ms. Christine Alalo oo ah Kusimaha Taliyaha Ciidanka Booliska AMISOM ayaa sheegtay in ay sii-xoojin doonaan awood siinta iyo tayaynta ciidamo boolis oo ka tirsan Jubbaland,kuwaas oo horey Booliska AMISOM u tababareen.
Ujeedada socdaalkooda ayaa saraakiishan ka socday Siera Leone lagu sheegay in ay tahay sidii ay uga qeybqaadan lahaayeen tayaynta iyo tababaridda ciidanka Booliska ee ka howlgala Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya oo tiradoodu gaareyso 145.
Kismaayo waxaa horey ugu sugnaa illaa 15 saraakiil boolis ah kuwaas oo ka socda wadanka Sierra Leone,iyadoona 145-tan kalena lagu xoojinayo saraakiishaas,tirada guud ayaa noqoneysa illaa 160 qof oo isugu jira Saraakiil iyo askar boolis ah.
Kusimaha Taliyaha Ciidanka Booliska AMISOM ayaa u mahadcelisay dowladda dalkaas Sierra Leone sida ay askarteeda ugu soo dirtay Soomaaliya si ay qeyb uga noqdaan taageerida Soomaaliya.
Ms. Christine Alalo ayaa sheegtay in Imaatinkooda ay wax badan kusoo kordhin doonto tababarka ciidamada Booliska.